Fandefasana entana: vidin'ny fandefasana, fanaraha-maso, fametahana marika, fanavaozana ny toe-javatra, ary fihenam-bidy ho an'ny ecommerce | Martech Zone
Misy fahasarotan'ny taonina miaraka amin'ny ecommerce - manomboka amin'ny fanodinana fandoavam-bola, ny logistika, ny fanatanterahana hatramin'ny alàlan'ny fandefasana sy ny fiverenana - izay manambany ny ankamaroan'ny orinasa rehefa mandray ny orinasan-tserasera izy ireo. Ny fandefasana dia, angamba, iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny fividianana an-tserasera - ao anatin'izany ny vidiny, ny daty andefasana ary ny fanarahana.
Ny vidin'ny fandefasana, haba ary sarany fanampiny dia tompon'andraikitra amin'ny antsasaky ny kalesy fiantsenana nilaozana. Ny fanaterana miadana dia tompon'andraikitra tamin'ny 18% ny sarety fiantsenana nilaozana.
Ny fampidirana vahaolana amin'ny fandefasana entana dia tsy vitan'ny hoe manatsara kokoa ny traikefan'ny mpanjifa sy mampitombo ny tahan'ny fiovam-po, afaka mamonjy anao koa izy io satria afaka miditra amin'ny tahan'ny fandefasana ireo rafitra ireo izay tsy noeritreretinao akory akory. ShippingEasy dia iray amin'ireo rafitra ireo.
Tombontsoa azo avy amin'ny fandefasana
Fandefasana mora dia sehatra fampidirana fandefasana an-tserasera izay tafiditra amin'ny sehatra e-varotra malaza rehetra ary miasa miaraka amina serivisy fandefasana entana marobe - ao anatin'izany ny UPS, FedEx, DHL eCommerce, DHL Express, Endicia, USPS Discounted Rate table, USPS CPP vs CBP, ary USPS Vata rezionaly.
Mamoha ny tahan'ny fandefasana tsaratsara kokoa - Midira amin'ny Pricing Plus Plus - ny sarany fandefasana entana ambany indrindra azo antoka — na firy na firy. Fanampin'izany, mahazoa fihenam-bidy manokana sy fihenam-bidy.
Ataovy pirinty haingana ny labels - Manonta labela, tantano ny baiko, alefaso mandeha ho azy ny fandefasana, alefaso ny làlan-kaleha ary ampandreneso ireo mpandray — izany rehetra izany dia sehatra fandefasana rahona mora ampiasaina sy mifototra amin'ny rahona.
Fanarahana sy fiverenana - Ny fanarahan-dia sy ny fiverenana dia ampahany lehibe amin'ny fanandramana mpanjifa e-varotra. Ny ShippingEasy dia mahatonga azy ireo ho mora aminao sy amin'ny mpanjifanao.
Ataovy mandeha ho azy ny fivezivezena - Ny automatisation mahery dia mandrindra ny fandefasana, ny fanarahana ary ny fiverenana mba hahafahanao mamadika ny fifantohanao amin'ny zavatra manan-danja kokoa - toy ny fananganana orinasanao.
Tatitra mandroso - Raiso ny hevi-baovao ilainao hitoetra eo an-tampon'ny fandefasana anao, ny mpanjifanao ary ny fanarahan-dia anao, amin'ny toerana iray.
ShippingEasy Email Marketing mandeha ho azy
Ireo mpivarotra an-tserasera dia afaka mampiasa angon-drakitra sy fandefasana entana handefasana azy ireo ho azy eo amin'ny mpanjifa, anisan'izany ny mailaka izay:
Lisitry ny fiantsenana nilaozana - mamerina ireo mpanjifa fantatra izay namela entana tao anaty saretiny.
Miteraha hevitra momba ny vokatra - mampifandray mivantana indray amin'ireo entana ao anaty filaharana
Vokatra mifandray amin'ny Upsell - miorina amin'ny entana ao anaty filaharana
Manolora fifampiraharahana sy tapakila - miorina amin'ny sandan'ny kaomandy na entana novidina
Avereno ny mpanjifa - miorina amin'ny toe-javatra tsy miasa
Ho fanampin'izay, misy tranomboky misy modely plug-and-play hahafahana mamorona snap. Ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa manampy azy ireo koa dia manampy amin'ny fametrahana fitsipika ary manapa-kevitra momba ny maodely koa ho an'ireo mpivarotra tsy manana traikefa marketing amin'ny mailaka kely.
Fandefasana mora dia namokatra fampidirana amin'ny 3dcart, Amazon Prime Shipping, Amazon Seller Central, BigCommerce, ChannelScore, eBay, Etsy, Magento, Prestashop, Quickbooks, Shopify, Storenvy, Volusion, WooCommerce, Yahoo! Fivarotana, sns. Manana tranomboky API feno ihany koa izy ireo amin'ny fampidirana amina sehatra e-varotra arahin'antoka.
Tsory ny fandefasanao ary tehirizo amin'ny ShippingEasy! Atombohy ny fitsapana MAIMAIM-POANA 30-Andro izao!
Fambara: mpiara-miasa aminay izahay Fandefasana mora.
Tags: 3dcartkalesy fiantsenana nilaozanaAmazon Prime ShippingMpivarotra Amazon afovoanyBigCommerceChannelScoreDHL eCommerceDHL ExpressEbayEndiciaetsy syFedExIntegrationsmagentoautomation marketingPrestaShopQuickbooksAPI fandefasana.fandefasana mandeha ho azyfandefasana labelsfandefasana entanafanaraha-maso ny fandefasanafandefasana workflowsshippingeasyshopifystorenvyfandefasana làlanaUPSUSPS CBPUSPS CPPUSPS CPP vs CBPTabilao misy fihenam-bidy USPSUSPS Regional Rate BoxvolusionwoocommerceYahoo! fivarotana